नयाँ संकथनका पुराना मोहरा- विचार - कान्तिपुर समाचार
नयाँ संकथनका पुराना मोहरा
चैत्र १, २०७५ उज्ज्वल प्रसाई
काठमाडौँ — शब्दको निर्माण र प्रयोग अराजनीतिक विषय होइन । अवधारणाको व्याख्यासँग राजनीतिको साइनो गाढा हुन्छ । शब्द एवं अवधारणाको प्रयोग र व्याख्या शक्ति–अभ्याससँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपाली राजनीतिले अर्थ र उपयोगिता बदलेका अनेक शब्द र अवधारणा छन् ।
भिन्न समयमा निर्मित भिन्न संकथनहरू यिनै शब्द र अवधारणाको खास व्याख्यामा आधारित हुने गर्छन् । शक्ति अभ्यासका क्रममा निर्माण गरिने संकथनमा सिंगो समाजले चिप्लेटी खेलेका उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो नेपाली सत्ता–राजनीतिले शब्द एवं अवधारणाका अनेक रोटेपिङ बनाएको छ । समृद्धि र राष्ट्रवादको चचहुईमा बुद्धि र भावनाको खेल चलिरहँदा वर्ग र पहिचान, समाजवाद र वामपन्थ, साम्यवाद र राजनीतिक साम्यवादका अनेक चाकाचुली पनि मच्चिएका छन् ।
सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्द त्यसै विवादित भएका होइनन् । एघारबुँदे सम्झौतामा प्रयुक्त ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनेको के हो ? यो वाक्यांशको व्याख्या गर्ने अधिकार कसको हो ? कसले गरेको व्याख्या आधिकारिक मानिने हो ? कसको व्याख्या अनुसारको व्यवहारलाई सही मानिने हो ? यस्ता प्रश्नमा सम्झौता जेलियो । ती शब्दलाई इंगित गर्दै स्वयं सत्ताधारी दलका नेताले गम्भीर संशय व्यक्त गरे । जनअभिमत भनेको सीके राउतले भन्दै आएको मधेस विखण्डनको सवालमा गरिने जनमत संग्रह त होइन ? यस्तो शंकालाई उकेरा लगाउँदै राउत र उनका समर्थकले ‘सम्झौताले जनमत संग्रह गराउने बाटो खोलेको’ बताए । यद्यपि यस लेखको उद्देश्य सीके राउतसँगको सम्झौतामाथि टिप्पणी गर्नु होइन । बरु सो सम्झौता भए लगत्तै सरकारले गरेको अर्को घोषणा र त्यस वरपर चलिरहेको विमर्शमा देखिएका शब्द–खेलबारे दृष्टि दिनु हो ।
नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई धेरैले ‘विप्लव समूह’ भन्छन् । राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिन नचाहेकाले ‘समूह’को पहिचान झुन्ड्याइएको बुझ्न कठिन छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले समूह भन्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो छैन । समूह भनेपछि केही सन्देहात्मक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । कस्तो ‘समूह’ले हतियार खरिद र सञ्चय गर्छ ? एकान्तमा भेला भएर सैन्य अभ्यास गर्ने समूहलाई कसरी बुझ्ने ? व्यापारीबाट निरन्तर चन्दा असुल्ने र चन्दा नदिनेको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कस्तो समूह हो ? यी सबै प्रश्नको सहज उत्तर हुन्छ— आपराधिक समूहले यस्ता काम गर्छन् ।
यस्तो ‘आपराधिक गिरोह’ले प्रचार गरेको ‘राजनीतिक उद्देश्य’ केवल आवरण हो भनेपछि उसका कुनै पनि गतिविधि राजनीतिक ठहरिएनन् । उसले फलाक्ने गरेको ‘क्रान्ति’को संकथन लुटपाट गर्ने बहानामात्र हुने भयो । सरकारले यिनै तर्कका आधारमा विप्लव र उनका कमरेडहरूलाई अपराधी भन्यो, उनीहरूका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो । दुई वर्ष अघिसम्म ‘जनवादी क्रान्ति’का लागि एउटै बाटो हिँडेका कमरेडले गृहमन्त्रीका रूपमा अर्का कमरेडलाई अपराधी भने । पहिले त्यही बाटो जायजमात्र होइन, अत्यावश्यक ठानेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अहिले त्यसलाई त्याज्य र दण्डनीय ठाने । गृह मन्त्रालयको घोषणा कायम रहेसम्म सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध जोकसैलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्नेछ । त्यही घोषणाका आधारमा कतिपय जेलमा कोचिनेछन्, कतिपय ‘दोहोरो भिडन्त’मा मारिन सक्नेछन् ।
सरकारी घोषणाको वैधताका लागि ‘पार्टी’लाई समूह बनाइयो । दल वा पार्टी शब्दले राजनीतिक अर्थ दिन्छ । मूलतः राजनीतिक कर्म गर्ने, जनतालाई राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा गोलबद्ध गर्ने कामलाई पार्टी शब्दले इंगित गर्छ । ‘समूह’ जस्तो पनि हुनसक्छ । समूह शब्दले कुनै खास वैचारिक वा सैद्धान्तिक अर्थ बोक्दैन । त्यसैका लागि ‘बादल’ नेतृत्वको मन्त्रालयले आफ्नै कमरेडको राजनीतिक दललाई पार्टी नभनेर समूह भन्यो ।
पार्टी शब्दको अघिल्तिर ‘आपराधिक’ विशेषण लगाउन मिल्दैन । आफू संलग्न ‘पार्टी’ले दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ दौरान गरेका अनेक ‘अपराध’लाई समेत राजनीतिक विवशताका रूपमा व्याख्या गरेका बादलहरूले विप्लवको दलमा आस्था राख्छु भन्नेलाई ‘अपराधी’ करार गर्ने भए ! यी सबै व्याख्यालाई वैध एवं ग्राह्य तुल्याउन ‘समूह’ शब्दको रणनीतिक प्रयोग गरिएको हो । नेपाली राजनीतिक भाष्यमा धेरै नयाँ शब्द र अवधारणा प्रचलित तुल्याएको उही माओवादी पाठशालामा हुर्केका दुई कमरेडले एकअर्कालाई निषेध गर्न अब यस्ता थुप्रै शब्द र अवधारणाका खेलहरू खेल्नेछन् ।
विप्लवले बादललाई ‘साम्राज्यवादी पुँजीवादको दलाल’ भन्नेछन् । बादलले विप्लवलाई ‘जनवादी क्रान्ति’को भ्रम सिर्जना गरेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि सयौँ युवाको जीवन बरबाद बनाउने ‘षड्यन्त्रकारी’ साबित गर्न खोज्नेछन् । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘मुट्ठीभर दलाल’ले आफ्नो व्यक्तिगत हितका निम्ति प्रयोग गर्ने ‘भ्रमपूर्ण औजार’का रूपमा विप्लव र उनका कमरेडले चिनाउनेछन् । यो व्यवस्थामार्फत ‘राष्ट्रिय पुँजी’को निर्माण गर्दै ‘समाजवाद’तर्फको यात्रा तय गर्नमा साम्राज्यवादीभन्दा ठूलो तगारो कम्युनिस्ट आवरणमा सञ्चालित ‘विप्लव समूह’ रहेको अबको सरकारी व्याख्या हुनेमा सन्देह छैन । नेपाली जनताले आफ्नो ‘मुक्ति’का निम्ति बगाएको रगतलाई ‘अपमान’ गर्दै पुँजीवादी सत्ताको मोहमा भुलेका ‘धोकेबाज’लाई अब जनताले नै ‘कठोर सजाय’ दिने विप्लवले उद्घोष गर्नेछन् । सो सजाय पाउनुपर्ने अग्रपंक्तिका मानिसहरूमा प्रचण्ड र बादलहरू हुनेछन् । ‘आफूमाथि विप्लवको आफराधिक समूहले आक्रमण गर्न खोज्नु जनतामाथि आत्रमण गर्नु हो’ भन्दै सो समूहलाई ‘निमिट्यान्न पार्नुपर्ने’ धारणा प्रचण्डहरूले व्यक्त गर्नेछन् ।
माथिका उदाहरणमा प्रयोग भएका ‘जनता’ अवधारणाका दुई फरक व्याख्या छन् । एकथरीले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गरेका नागरिकलाई जनता भनेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी भएर तिनले दिएको मतले आफूलाई वैध शासक बनाएको र आफूले गरेको सबै काम तिनै मतदाताका लागि सही साबित हुन्छ भन्ने बादलहरूको व्याख्या हो । कतिसम्म भने ‘विप्लव समूह’लाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्ने काम पनि तिनै मतदाताका मतका कारण वैध हुन्छ भन्ने उनीहरूको व्याख्या हो । यो शासन व्यवस्थाले पाखा पारेका, अधिकारबाट वञ्चित गरेका बहुसंख्यक नागरिक छन्, तिनले आफ्नो मुक्तिका लागि आफ्नो नेतृत्वमा क्रान्ति हाँकेका हुन् भन्ने व्याख्या विप्लवको छ । क्रान्तिको नेतृत्व गर्नु नै ती जनताको असली प्रतिनिधि हुनु हो भन्ने सो व्याख्याको आधार हो । यसरी नै समाजवाद, पुँजीवाद, अपराध, सजायजस्ता सबै अवधारणाका आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छन् ।
दुई भिन्न संकथन निर्माण गरेर द्वन्द्वमा होमिएका दुई पक्षले छुटाएको विषय भने इतिहासको निर्मम समीक्षा हो । के हिजो प्रतिबन्धित गरिएका कुनै दल निमिट्यान्न भए ? हिजोका कांग्रेस, एमाले र स्वयं बादलहरूको नेतृत्वमा रहेको माओवादी प्रतिबन्धित थिए । वर्तमान भारतको त्यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्रले निमिट्यान्न पार्न खोजेर नसकेको नक्सली समूह पनि सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको ‘आपराधिक समूह’ हो । सैन्य बलको आडमा पेलेर सिध्याइएको भनिएको श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको भग्नावशेष जुनसुकै बेला आगोको मुस्लोमा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै दललाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्नुअघि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक थियो । प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने बिसौँ उपायबारे छलफल चलाउन जरुरी थियो । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक रूपमा परास्त गर्नसक्ने कोसिस जरुरी थियो । त्यो केही नगरी पुरानो सत्ताले बारम्बार प्रयोग गरेको कथ्यलाई नयाँ रोगनमा दोहोर्‍याउनु समाजलाई दुःखको अर्को भुमरीमा फँसाउनु हो ।
इतिहासको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने जिम्मेवारी सरकारको माक्र होइन । नेत्रवित्रम चन्द र उनका कमरेडहरूले समेत यसबारे उतिनै जिम्मेवारीपूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक थियो । विद्यमान आन्तरिक एवं वैश्विक परिवेशमा उनीहरूले अपनाएको ‘क्रान्ति’को बाटो घातक हुने निश्चित छ । केही वर्षअघि मात्रै गरिएका प्रयोगले बेहोरेका त्रासदीपूर्ण विफलताबाट पाठ सिक्न नखोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । केवल पैसा र हतियार थुपारेर क्रान्ति हुँदैन भन्ने सत्य नेपालमै सावित भइसकेको छ । पेरु जस्ता देशमा ‘प्रोट्र्याक्टेड वार’ले जन्माएका आपराधिक जत्थाबारे अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ । वस्तुगत परिस्थितिलाई अन्ध महत्त्वाकांक्षाले केही समय धुमिल बनाउन सक्छ, बदल्न सक्दैन । हिजो आफूले बेहोरेका दुःख र आफैंले गरेको प्रयोगबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा नगरेर ‘एकीकृत क्रान्ति’जस्ता नयाँ संकथन निर्माणमा रुमलिनु सिंगो समाजलाई धोका दिनु हो ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:०७
शोकमा त संकोची बनौं
चैत्र १, २०७५ लीला लुइँटेल
काठमाडौँ — हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्क्री रवीन्द्र अधिकारी लगायत देशका अन्य व्यत्तिहरूको मृत्यु भएर सिङ्गो देश शोकमा रहेको एकदिन पनि बित्न नपाउँदै उनकी पत्नी विद्या अधिकारीले लेखेको र वाचन गरेको भन्दै एउटा कविताको भिडियो युट्युबमा राखियो ।
यस अघि विद्या अधिकारीसँग कुनै दृष्टिबाट परिचित नभएकी र कहिल्यै आवाजसम्म नसुनेकी मलाई उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा यति छिटै यस्तो कविता लेखेर रेकर्ड गरी युट्युबमा समेत राख्न सक्छिन् भन्नेमा विश्वास लागेन । केही अंश सुनेर युट्युब बन्द गरिदिएँ । उक्त भिडियो आफूले बनाएर युट्युबमा नहालेको भनी विद्या अधिकारीसहित उनको परिवारका सदस्यले आपत्ति जनाएको तथ्य अहिले बाहिर आएको छ ।
मृत्यु शाश्वत सत्य हो भनेर जान्दाजान्दै यससँग साक्षात्कार हुँदा सम्बद्ध परिवारलाई परेको बज्रपातको मात्रा कसैले पनि अनुभूति गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि कुनै बिमार नै नभई अल्पायुमै एक होनहार व्यक्ति एक्कासी दुर्घटनामा परेको समाचार सुन्दा ऊसँग आश्रित एवं अत्यन्तै निकट व्यक्तिलाई हुने पीडाको अनुमान गर्नु जस्तै मै हुँ भन्ने व्यक्तिको पनि सामर्थ्य बाहिरको कुरा हो । अझ आफूमाथि परेको बज्रपातको यस्तो अवस्थामा केही समय नेपाली महिला बाहिरबाट हेर्दा सग्लो शरीरयुक्त देखिए पनि उनीहरू लगभग अचेत अवस्थामै हुन्छन्, केही बोल्न सक्ने अवस्थामै हुँदैनन् । यस्तो स्थितिमा सम्बद्ध व्यक्तिको पीडालाई भजाएर कस्तो प्रकारको आनन्द लिइरहेका छौँ हामी ? यस्तो संवेदनालाई ख्याल गर्दै कसैले भिडियो खोलेर सुने अनि सेयर गरेबापत कसैको खातामा निश्चित रकम जम्मा हुने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी यस्तो नकाम गर्छ भने योभन्दा निकृष्ट र निन्दनीय क्रियाकलाप यस धरतीमा अर्को हुन सक्तैन । कोही शोकमा परेका बेलासमेत भ्रमको खेती गर्न ध्यान दिइरहने केही व्यक्तिको खुराफाती मानसिकतालाई देख्दा हामी साँच्चै जिउँदा मानव हौँ त भनेर एकपटक आफैलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ । अर्कातिर राजनीतिका क्षेत्रमा त यसले विकरालै रूप लिएको देखिन्छ । राजनीति सम्बद्ध व्यक्तिको मृत्यु भएर अन्तिम संस्कारसमेत गर्न नपाउँदै उसको स्थानमा कसलाई विराजमान गराउने भन्ने खिचडी पाक्न सुरु भइसक्छ ।
विद्युतीय सञ्चारको अभूतपूर्व विकासले गर्दा अहिले हामीलाई हरेक घटना तत्कालै प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाइने सुविधा प्राप्त छ । परिवार गुमाउनुको पीडाले लगभग चेतनाहीन अवस्थामा पुगेको मानिसका मुखमा माइक ठोसेर ‘तपाईंलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ’ भनी गरिने प्रश्न पनि केही समययता हाम्रालागि नौला रहेनन् । पीडाले ग्रस्त सम्बन्धित व्यक्तिको त कुरै भएन, उक्त पीडासँग असम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि यस खाले क्रियाकलाप अत्यन्त विडम्बनापूर्ण तथा भद्दा ठट्टाजस्तो लाग्छ । अनि यस्ता प्रश्न गर्ने सञ्चारकर्मी चेतन अवस्थामै छन् त भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन्छ ।
सञ्चार जगतमा मात्र नभएर अहिले यस खाले असंवेदनशील क्रियाकलापले साहित्यका क्षेत्रमा पनि आक्रमण गरिसकेको स्थिति सबैले देखेभोगेकै हुनुपर्छ । अहिले कुनै साहित्यकारको मृत्यु हुँदा समवेदना पत्र छापेर फ्रेममा सजाई सेता लुगा लगाएका व्यक्तिलाई प्रदान गर्न लागिएको पोजवाला फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रचलन पनि व्यापक देखिन्छ । यसैगरी कतिपय शोकाकुल घरमा जाँदा समाजका अगुवा भनिनेहरूले फ्लेक्स ब्यानरमा समवेदना बनाएर लैजाने गरेका छन् । यस्ता फ्रेम र ब्यानरहरूले सम्बन्धित शोकाकुल परिवारलाई गौरवको अनुभूति गराउँछन् कि पीडा झन् बल्झाउँछन् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।
अझ कुनै साहित्यकारको मृत्युपछि जीवनी लेखनका नाममा उनको साहित्यिक व्यक्तित्व, कृतित्व एवं नेपाली साहित्यमा उनले दिएको योगदानलाई ओझेलमा राखेर सम्बद्ध व्यक्तिको यौनजीवन, प्रणय प्रसङ्ग लगायतका नितान्त व्यक्तिगत सन्दर्भहरू थैथै पारेर आफू चर्चामा आउने होड पनि वर्तमानमा चलेको छ । तथाकथित यस्ता जीवनीहरूमा अरू त अरू सम्बन्धित साहित्यकारले कुन–कुन नाम प्रयोग गरेर साहित्यको सिर्जना गरेका थिए, उनको साहित्य यात्रा कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो, उनले कुन–कुन विधाका के कस्ता कृति लेखेका थिए भन्नेजस्ता सामान्य जानकारीधरि नभएकाहरूले पनि जीवनी साहित्यमा आफूले ठूलो योगदान दिएको भ्रम छर्दै तथ्यहीन, अनर्गल एवं नितान्त वैयक्तिक कुरा उछालेको पाइन्छ । सबभन्दा हास्यास्पद कुरा त वर्तमानमा जीवितै रहेका दस लेखक मिलेर लेखेको र २०३२ सालमा प्रकाशित भएको कृतिलाई पनि चार जनाले मिलेर लेखेको भनी भ्रामक उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी आफ्नै समकालीन यथार्थको समेत जानकारी नहुनेले नितान्त वैयक्तिक एवं अनर्गल कुराहरू लेखेर जीवनी लेखेको धाक दिनु पनि सम्पूर्ण नेपाली साहित्यकै लागि विडम्बना हो । यस खाले जीवनी लेखन सम्बन्धित साहित्यकारको परिचय आउने पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्ने नभई जीवनी लेखेको भ्रम सम्बन्धित परिवारलाई दिएर उनीहरूबाट केही अपेक्षा गर्ने अभीष्टले प्रेरित भएको यथार्थसँग पनि नेपाली साहित्यका पाठक लगभग परिचित छन् ।
यस संसारका सबै भूगोल, धर्म, पेसा तथा वर्गका मानिसले मृत्युलाई अत्यन्त संवेदनशील ठानेर व्यवहार गरेको पाइन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा केही बोलि–लेखिहाल्नुभन्दा पहिले यसले सम्बद्ध व्यक्तिको परिवारलाई कस्तो पीडा दिनसक्छ भन्नेबारे सचेत हुन ढिलो भइसकेको हो कि ?
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:०६